Isbahaysiyada siyaasadeed ee Jubilee iyo Cord oo ku gacan seyray in doorashada guud dib loo dhigo – The Voice of Northeastern Kenya
Isbahaysiyada siyaasadeed ee Jubilee iyo Cord oo ku gacan seyray in doorashada guud dib loo dhigo
Iyada oo la qorsheeyay in doorashada guud ee soo socoto ay dalka ka dhacdo 8-da bisha August sanada 2017-ka ayaa waxa hada isbahaysiyada siyaasadeed ay ku gacan seyren xeer ilaaliyaha guud Prof Githu Muigai oo soo jeediyay in xiliga doorashada dib loo dhigo.
Todobaadki la soo dhaafay ayuu Githu Muigai soo jeediyay arrintan isaga oo hortagay gudiga laba geesoodka ah ee baaritaanada ku sameynayo gudiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee IEBC.
Prof Githu Muigai ayaa xusay hadii saraakiisha IEBC shaqada laga tiro waa in xiliga doorashada la durjiyo maadama sida uu hadalka u dhigay gudiga xiga ee la soo magacaabo ay helayaan fursad buxda oo ay isku diyaarin karaan.
Gudoomiyaha golaha ay ku bahoobeen gavanarada dalka Peter Munya iyo Otiende Amollo oo ah gudoomiyaha gudiga cadaalada ee loo yaqaano Ombudsman ayaa sido kale soo jeediyay in taarikhda doorashada guud la qabanayo dib loo dhigo.
Hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka mudane Aden Bare Ducale aya uga digay in gudiga laba geesodka ah ay arrintan ku dhaqaqaan isagoo xusay in isbahaysiga Jubilee unan ogolaaneynin in xita hal saac lagu daro xiliga la qorsheeyay iskaba daaf hal maalin.
Ducale oo hadalka ka soo yeeray xeer ilaaliyaha guud ku tilmaamay mid anan macquul ahayn ayaa sheegay waa in dastuurka la raaco.
Dhanka kale Norman Magaya oo cord matalayay ayaa sheegay in hadii saraakiisha gudiga IEBC la bedelo aynan sameyneynin xiliga doorashada.
← Howlgal ka dhan ah darawaliinta ku xadgudbayo shurrucda wadoyinka oo maalintii labaad galay
Mid kamid ah sarkaaladii lala xiriiriyay dilkii Willy Kimani oo wajahaya dacwad kale oo dil ah →
1 thought on “Isbahaysiyada siyaasadeed ee Jubilee iyo Cord oo ku gacan seyray in doorashada guud dib loo dhigo”
fikradeyda waxa waye waa iin dasturka laraaco hadii kele qalalaasada siyaasadeed wey sii socon